Madaxweynaha Shabakada Dalxiiska Aduunka ayaa gudoonsiiyay Billada Shaqaalaha Rayidka ah ee COVID-19 ee Caafimaadka Bulshada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Awards » Madaxweynaha Shabakada Dalxiiska Aduunka ayaa gudoonsiiyay Billada Shaqaalaha Rayidka ah ee COVID-19 ee Caafimaadka Bulshada
Wararka Ururada • Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Hoteelada & Dalxiisyada • LGBTQ • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
COVID cadawgeeda ugu xun wuxuu ahaa warshadaha safarka iyo dalxiiska. Xubnaha ka tirsan warshadani waxay dib ugala dagaallamayeen waddan kasta, waax kasta oo ka tirsan warshadaha. Hoggaamiyeyaal badan ayaa qayb ka ah Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee dib u dhiska doodda safarka. Dadaalkan waxaa aqoonsaday Dowladda Mareykanka iyadoo billad gudoonsiisay wada-aasaasaha iyo madaxweynaha Dr. Peter Tarlow.
The Dalxiiska Adduunka Network u soo baxday urur ahaan dib u dhiska safarka dood ayaa laga bilaabay sanad ka hor bishii Maarso 2020 magaalada Berlin, Jarmalka. Hadafku wuxuu ahaa in la bilaabo wadahadal ku saabsan cudurka faafa ee COVID-19.
Ku dhowaad 2,000 hoggaamiyeyaal dalxiis oo ka socda bulshada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee 127 dal ayaa u shaqeynaya xubin ahaan iyo kormeerayaal ka tirsan WTN. Ujeeddadu waa in la helo oo la isku duwo waddo ka sii durugsan COVID oo loo maro warshadaha dalxiiska adduunka.
Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan u aqoonsatay Madaxweynaha WTN ahna aasaasaha Dr. Peter Tarlow shaqadiisa adag ee uu u qabtay Shabakadda Dalxiiska Adduunka. Dr. Peter Tarlow waxaa la gudoonsiiyey Billada Adeegga Bulshada Rayidka ah ee Mareykanka ee COVID-19.
Khushuuc iyo is-hoosaysiin weyn ayaan ku aqbalayaa 'Adeegga Caafimaadka Dadweynaha ee Mareykanka ee COVID-19 Faa'iidada Adeegga Madaniga ah ee Faafa' oo uu ii soo bandhigay Admiral (ret) Dr. Brett Giroir. Birtani waxay kahadleysaa shaqada adag ee Shabakada Dalxiiska Adduunka ay u qabaneyso xulafo ahaan dagaalka lagula jiro Covid-19. COVID kaliya ma baabi'iso nolosha laakiin sidoo kale waxay burburisaa dhaqaalaha, mana jirto wax warshado ah oo ka aqoon badan tan Safarka & Dalxiiska Warshadaha.
Billaddan waxaa bixiyay Admiral Brett Giroir oo Mareykan ah.
“Dhamaanteen ka qeybqaadanay Shabakada Dalxiiska Adduunka waan ku faraxsanahay maanta. Peter waxay aqoonsatay Dowlada Mareykanka shaqadiisa uu ka qabtay ururkeena yari. Waxaan rajeyneynaa in aqoonsigani uu naga caawin doono shaqadeena mustaqbalka, sameynta iskaashiyo, iyo gaar ahaan soo qaadida mashruucii udoodida ee ugu dambeeyay ee loo yaqaanay “Caafimaadka aan Xudduudda Lahayn, ”Ayuu yiri Guddoomiyaha ahna aasaasaha Juergen Steinmetz, oo sidoo kale ah daabacaha eTurboNews.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN) waa codka mudada dheer laga sugayay ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo ganacsiga dalxiiska adduunka oo dhan. Markaan mideyno dadaalkeenna, waxaan horkeennaa horudhaca baahiyaha iyo himilooyinka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo daneeyayaashooda.
Shabakada Dalxiiska Adduunka ka soo baxay dib u dhiska.rajo dood. Doodda dib-u-dhiska.shaqada waxay ka bilaabatay Maarso 5, 2020 dhinaca ITB Berlin. ITB waa la joojiyay, laakiin dib u dhiska wadada ayaa lagu bilaabay Grand Hyatt Hotel ee magaalada Berlin. Bishii Diseembar, dib-u-dhiska. Safarka ayaa sii socday laakiin waxaa lagu qaabeeyey urur cusub oo lagu magacaabo World Tourism Network (WTN)
Isku soo wada duuboo xubnaha waaxda gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah ee barnaamijyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah, WTN kaliya uma doodayso xubnaheeda laakiin waxay siisaa cod ku saabsan kulamada waaweyn ee dalxiiska. WTN waxay xubnaheeda ku leedahay in ka badan 127 dal waxay siisaa fursado iyo isku xirka muhiimka ah.
Iyada oo lala shaqeynayo daneeyayaasha iyo dalxiiska iyo hoggaamiyeyaasha dowladda, WTN waxay dooneysaa inay abuurto habab cusub oo loogu talagalay kobcinta waaxda dalxiiska ee loo wada dhan yahay oo waara isla markaana lagu caawiyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo dalxiiska inta lagu jiro xilliyada wanaagsan iyo kuwa adagba.
WTN waxay siisaa cod siyaasadeed iyo mid ganacsi oo qiimo leh ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxayna siisaa tababar, la-talin, iyo fursado waxbarasho
Our "Dib u Dhiska Safarka" Hindisaha waa wadahadal, is weydaarsi fikrado, iyo bandhig loogu talagalay dhaqanka ugu fiican ee xubnaheenna in ka badan 120 dal.
Our "Geesi Dalxiis" Abaalmarinta waxay aqoonsan tahay kuwa taga masaafada dheer ee u adeega bulshada safarka iyo dalxiiska laakiin badanaa waa la iska indhatiraa.
Our "Khatimidii Dalxiiska ee Nabdoon" waxay siineysaa daneeyayaashayada iyo meelaha aan u socono barxad ay ku muujinayaan rabitaankooda ah in dib loo furo dalxiiska si nabadgelyo iyo masuuliyad leh.
Si loo gaaro himilooyinkaas WTN iyada kooxaha xiisaha leh.
Xubnahayagu waa kooxdayada.
Waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaal la yaqaan, codad soo baxaya, iyo xubno ka socda qaybaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah oo leh ujeedo ujeedo leh iyo dareen ganacsi oo mas'uul ah.
Wada-hawlgalayaashayada ayaa ah xooggeenna.
Wada-hawlgalayaashayada waxaa ka mid ah ururrada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dadaallada lagu tagayo meelaha la tagayo, warshadaha soo-dhoweynta, duulista, soo-jiidashada, bandhigyada ganacsiga, warbaahinta, la-talinta, iyo u ololeynta iyo sidoo kale ururada bulshada, dadaallada, iyo ururada.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Shabakada Dalxiiska Adduunka iyo ku biirista dadaalkan muhiimka ah, fadlan booqo www.wtn.travel